Amsterdam iyo wax kale - Geofumadas
Amsterdam oo dheeraad ah
Oktoobar, 2010 egeomates My, Leisure / waxyi, safarka
Safar dheer. 2 saacadood ka Central America si Miami, saacadaha 8 London, Amsterdam more 1: 6 daray xidhiidhka ka gaaraan 17.
Saacadda bayoolajiga ayaa loo adeegsadaa sidii loo xoojin lahaa sida xayawaanka ku jira diyaaradda. Laakiin caloolxumadu weli weli ma leh. sidaa daraadeed badhtamaha habeenkii waa inaan helaa kafeega iyo cake.
Boston UK oo dhan aroor hore, iyadoo 59 Centigrade ka baxsan oo safar dhanka ah bidhaamayaan ... xaqiiqdii la barbardhigo lahayn.
Waayo, hadda, diyaarinta, saaxiibkay John, shaqo Spanish ee Holland sanado waa miiska diiwaangalinta ee soo socota si ay u Christine.En u xarrago hoolka weyn ee diyaariyo audio in ka maqan yahay gura wayn, tijaabiyo saamaynta iyo calaamooyin kaalinta ee goobaha. Wax kasta oo horey u dhacaan, iyo in qofna malaha abaalmarinta gala.
Waxaan ku dhuftay mid ka mid ah afduubyada, soo dhaweynta luuqadaha dalal matalaya. Style waa daruuri xaddiga ah ee tags in blogs iyo WordPress sameeyay moodada.
Guryaha ku yaal Wyndham Apollo Hotel, guud ahaan, waa mid aad u wanaagsan. Wax kale oo aan ka maqneyn waxa ku dhawaad ​​hudheel kasta oo diyaar u ah dalxiisayaasha Mareykanka: Shabakadda wireless.
Waxay bixiyaan adeegga tv-ga, laakiin waa jiid. Moodada ayaa ah batoon aad ujirto sida kubadaha cas cas yar yar ee laptops ugu horeysay. Adeegga LAN-ka ee 10 Euros saacaddu waxay u muuqataa sida dhacdada ... sida aan dhihi lahaa Obelix:
Iyo cimilada; farxad 8 qalinjabinta heerarka ugu fiican.
Waxba kuma laha deegaanka Caribbean, laakiin dadkan waa mid mudnaan ah in ay qorraxda lahaa dhowr saacadood 1 pm kaliya markii ganacsiyada ugu furan. Inkasta oo ay kabaallaynta odayaasha qaar ka mid ah inuu baxo, waayo, kafeega ah ku maraan, oo waxay qaadan muddo ah si bufanda.Mis guys dhinaca kale waxaan aan u heshaan kartaa; Saacadaha 8 kala duwanaansho waxay siisoconayaan iyaga inay iga tagaan farriimo waxayna iga caawiyaan inaan sii noolaado lo'da beeraha.
Ilaa iyo inta ay soo socoto berri, raadso adegyada awooda iyo fiyuuska ah ee Obelix la soo ururiyo ilaa inta uu barafku uusan ku dhicin. Ka dibna in la dhigo magangalyo ee kuleylka mara taageerayaasha xfm, oo leh cappuccino & amaretto iyo suudi ka yimid makhaayadda Japan ee Yamazato.
farqi weyn sanadkii hore, markii ay taasi ma beego dhammaadka wakhtiga dunidu ka baxdo, laakiin dalkayga, dad badan ayaa sheegaya in Madaxweynaha Lobo isaga si fiican u qallajiyey bajaamarka. Cadaadis bulsheed oo isku mid ah, rajeynaya, isla markaana aan dib u soo celin doonin dhibaatooyinkaas, oo aan weli soo afjarin kii hore.
Post Previous«Previous Indho at gvSIG 1.10
Post Next Muujinta twitter: Soo DhawowNext »